युक्रेनसंग युद्द जारी रहेका बेला रुसी विदेशमन्त्री एकाएक किन आइपुगे भारत ? यस्तो छ तयारी — Sanchar Kendra
युक्रेनसंग युद्द जारी रहेका बेला रुसी विदेशमन्त्री एकाएक किन आइपुगे भारत ? यस्तो छ तयारी
काठमाडौं । रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभ दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत आउँदैछन् । २४ फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि रुसको तर्फबाट भारतमा हुन लागेको यो उच्चस्तरको भ्रमण हो । रुस-युक्रेन द्वन्द्वमा भारत रुसको पक्षमा छ ।